सगरमाथामा नाचेर विश्व रेकर्ड राख्दै छन डान्स किङ्ग मनिस
प्रकाशित मिति: February 17,2018
सगरमाथामा नाचेर विश्व रेकर्ड राख्दै छन डान्स किङ्ग
नेपाली डान्स किङ्ग भनेर चिनिदै आएका कोरियोग्राफर, गायक तथा मोडल मनिस श्रेष्ठले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा नाचेर विश्व रेकर्ड राख्ने भएका छन । एउटा खुट्टा काधमा राखेर लामो दुरी पारगरि विश्व रेकर्ड राखिसकेको कोरीयोग्राफर श्रेष्ठले अव भने सगरमाथाको चुचुरोमा एक खुट्टा काधमा राखी पाँच मिनेटसम्म रहेर विश्व रेकर्ड राख्न लागेका हुन । साथै कोरीयोग्राफर श्रेष्ठले नाट्य श्वरीको मुर्ती र नेपालको झण्डा पनि सगरमाथाको चुचुरोमा पुर्‍याउने भएका छन । यसका लागि तयारी भइरहेको र छिट्टै आºनो नाममा यो रेकर्ड राख्ने उनको दावी छ ।
कृतिमानी युवा संघ नेपाल काठमान्डौको समेत अध्यक्ष रहेका श्रेष्ठलाई LYCEUM Paradise Academyले राष्ट्रिय गानका लेखक प्रदिप कुमार राई (व्यकुल माइला) लगायत उच्चपदस्थ व्यक्तीबाट समेत सम्मानित भई सकेका छन ।
कोरियोग्राफर श्रेष्ठले सय भन्दा बढि गितको कोरियोग्राफी गरि सकेका छन भने, ३६० भन्दा बढि गितमा मोडलिङ्ग गरि सकेका छन् । त्यस्तै श्रेष्ठ मिठो स्वरको धनि पनि छन् । उनले ३६ भन्दा बढि गित बजारमा ल्याई सकेका छन् । त्यसो त श्रेष्ठ नृत्य प्रशिक्षक पनि हुन , उनले अहिले कोटेश्वर भाटभटेनी नजिकै :क् म्घ क्तबच कलाकेन्द्र समेत खेलेका छन् । चापाचाप विद्यार्थी भएको उक्त कलाकेन्द्रका अलवा श्रेष्ठ MS Troops Dancing Crew को समेत व्यवस्थापक हुन । साथै उनी हास्यकलाकार पनि हुन । हर्के हवल्दारमा धतुरेको भुमीकामा देखिएका छन । उनको अनि की जीन्दगी चलाउन पेट्रोल चाहिन्छ की डिजल भन्ने निकै चर्चीत थेगो हो । त्यस्तै उनी टाक्क टुक्क टेलीफिल्ममा पनि ज्याक्सनको भूमिकामा देखा परेका छन ।
कलाकारीताको अलवा श्रेष्ठ साहित्य विधामा पनि कलम चलाउन पोक्त छन । उनले २ वटा उपन्यास र २ वटा कविता संग्रह बजारमा ल्याएका छन । बाल्यकालमा अभावको जीवन जिउँदै आएका श्रेष्ठले बढि सामाजीक परिवेशमा कलम चलाएको पाईन्छ । यति मात्र नभएर डान्स किङ्ग श्रेष्ठले अनाथ तथा असाह्य बालबालिकालाई पनि सहयोग गर्दै आएका छन् । अहिलेसम्म उनले ५ जनालाई आºनै घरमा पालेर आफै जीवन यापन गनै सक्ने बनाई सकेका छन । आगामी दिनमा पनि अरुलाई पनि सहयोग गर्दै जाने उनि बताउँछन । साथै अगाडि श्रेष्ठ भन्छन अहिले पनि हाम्रो एम.एस. डान्स ट्रप्सले काभ्रेका कुमार तामाङ्ग बचाउ अभियानमा लागि परेका छौँ । हाम्रै पहलमा दुवै मृगौला फेल भएका तामाङ्ग र उनका मुटूको विरामी श्रीमतीलाई आजीवन औषधोपचार गर्न भिजन हस्पीटलका डा. हिमाल श्रेष्ठले सहयोग गर्नु भएको छ । तामाङ्गको उपचारको लागि :क त्चययउक ले विभिन्न कार्यक्रममा स्टेजमा नाचेर पनि सहयोग संकलन गर्दै आएको छ । हिजो आज स्टेज कार्यक्रम र भिडियो तथा गायनमा निकै व्यस्त हुँदै आएका श्रेष्ठ आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्दै जानेमा बाधा गर्दछन